गीतले जुराएको गृहस्थीरामचन्द्र काफ्ले–जुनु रिजाल दम्पती संगीत पेसामा आबद्ध छ। रामचन्द्रका 'हिउँ चुलीमा घाम लाग्यो', 'लाठी चार्ज', 'वार्ता गराइदेऊ'लगायत दर्जनौँ गीत हिट छन्। त्यसै गरी जुनुले गाएका 'कसले सुरुवात गर्यो ', 'हिमाललाई...	सेक्स विचलनएउटा किशोर महिलाका ब्रा र पेन्टी चोरेर यौनतृप्ति लिन्छ।
अर्को युवा महिलाले लुगा फेरेको हेरेर चरमोत्कर्षमा पुग्छ।
अनि, अर्को व्यक्ति दिनमा एउटा नीलो फिल्म हेरेन भने बौलाहा जस्तो हुन्छ।
समाजमा सेक्स विचलन बढ्दो...	ढाका : जाम जीवनशैलीढाका जानुअघि बाङ्लादेशबारे मैले पढे–सुनेको सामान्य ज्ञान चार–पाँच बुँदामा थियो।बाङ्लादेशलाई भाषा, कला, संगीत, नाटक र नृत्यको देश भनिन्छ। संसारमा यो मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ मातृभाषा नै देश निर्माणको मुख्य...	खतरनाक पिरतीकास्की, पुम्दीभुम्दीकी चाँदनी बराल र कलिम शेख प्रेममा थिए। डेढ वर्षसम्म चलेको उनीहरूको प्रेम शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्यो। बिस्तारै कलिमलाई चाँदनीप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो। उनीसँगको सम्बन्धबारे अरूले थाहा पाउलान् भन्ने पिर...	को जाओस् पार्टी कार्यालय?
26 Feb 2015 बिहीबार १४ फागुन, २०७१
शुक्रवार एक वर्षअघि सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका नेता भेटिँदैनन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइराला सार्वजनिक कार्यक्रमबाहेक गत साउनदेखि कार्यालय पुगेका छैनन्। विस्तृतमा
शुक्रवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अघिल्लो साता सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका करिब डेढ सय उपलब्धिको लामो सूचि सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले हासिल गरेका भनिएका उपलब्धि जनताले पढिनसक्दै उनै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आमजनताको चाहना र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार… विस्तृतमा
शुक्रवार मिकेल, डेनिस, मार्लेना र क्लाउडिया। यी चार महिला आफ्ना विशाल हिपका कारण संसारभर चर्चित छन्। उनीहरूका असामान्य रूपले चौडा नितम्बहरूको संयुक्त नाप हुन्छ– २७ फिट! विस्तृतमा
शुक्रवार छोराछोरीले दुःख नपाऊन् भनेर मान्छेले उनीहरूका नाममा सम्पत्ति राखिदिने गर्छ। कसैले करोडौँको सम्पत्ति बाँदरको नाममा गरिदिन्छ भन्ने सुन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ। तर, यो दुनियाँ हो, जो विचित्र छ र यहाँ जे पनि हुन्छ। विस्तृतमा
बोनसः पोर्नस्टारसँग एक रात!
शुक्रवार भर्खरैजसो चिनियाँहरूले नयाँ वर्ष मनाए। नयाँ वर्षमा कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई उपहार र बोनस दिने गर्छन्। बोनसमा घर, कार, विदेश भ्रमणको अवसर आदि दिइने गर्छ। तर, एक इन्टरनेट सेक्युरिटी कम्पनीले भने नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आफ्नो उत्कृष्ट कर्मचारीलाई अनौठो बोनस दिने घोषणा गरेको… विस्तृतमा
बलात्कारीलाई १५ सय वर्ष जेल सजाय
शुक्रवार कुख्यात बलात्कारी अल्बर्ट मोराकले थुप्रै महिलाको जीवन बर्बाद पार्योु। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्ग उच्च अदालतले उसलाई १५ सय ३५ वर्ष जेल सजाय दिएको छ। विस्तृतमा
भित्र भद्र बाहिर छाडा
24 Feb 2015 मङ्गलबार १२ फागुन, २०७१
शुक्रवार मान्छे स्वभावैले बन्धन नरुचाउने प्राणी हो। खानदानी, हुनेखाने वा सम्पन्न परिवारका सन्तानले घरभित्र कडा अनुशासन र निगरानीमा रहनुपर्छ। तर, जब उनीहरू घरको पर्खाल नाघ्छन्, उन्मुक्त भइहाल्छन्। अनि, सीमा नाघेर रंग–रमाइलोमा लीन हुन्छन्। मदिरा र सेक्सको लतमा फस्छन्। घरभित्र 'माइल्ड' र… विस्तृतमा
अम्मर जिसी भन्थे कबीर- ढाई अक्षर प्रेमको जसले पढ्यो, उही विद्वान हुन्छ। युद्ध, हिंसा, अशान्ति र बेथितिमा नराम्रोसँग जेलिएको यो संसारमा आज केहीको सबैभन्दा तीव्र आवश्यकता छ भने प्रेमकै छ। भ्यालेन्टाइन्स डेे प्रेम र सद्भाव दर्शाउने, प्रकट गर्ने पर्व हो। नेपाली समाजमा… विस्तृतमा
विनोदविक्रम केसी प्रेमबाबुले मायालाई बजार बनाइदियो। मेमसाहेब बनाउँछु भन्थ्यो, मैनको पुत्ला बनाइदियो। 'मेरी गुलाब, मेरी गुलाब' भन्दाभन्दै सार्वजनिक सयपत्री बनाइदियो। विस्तृतमा